> Resource> Video> Mfe Jiri Video edezi Software na Nice Atụmatụ
Chọrọ ihe dị mfe omume dezie n'ụlọ gị gị na fim? Na ị bụghị naanị ya. Onye ọ bụla bụ ọrụ n'aka na adịghị nwere oge zuru ezu iji chepụta otú dezie videos. M na uche, ihe ezigbo video edezi software kwesịrị mfe maka onye ọ bụla ka malitere. Ọ pụrụ ịdị mfe video edezi software, ma ọ dịkarịa ala nwere ihe nile nkiti atụmatụ ị chọrọ. My nkwanye bụ Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), nke compromises usability na ikike iji ihe kasị mma. Ọ bụghị nanị na-abịa na niile nkịtị video edezi ngwaọrụ na gị fingertips, ma na-atụmatụ i nwere ike mkpa na-ewetara gị videos na-esonụ larịị.
Ugbu a ego ihe nke a mfe iji video edezi software nwere ike ime ka gị. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, dị nnọọ ịmụta Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Mac iji nweta otu ihe ahụ.
Easy Video edezi Software na onye kensinammuo Interface
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụ ihe dị mfe video edezi software na-abịa na onye kensinammuo interface. Anyị e a dị mfe video edezi software maka n'ụlọ ọrụ, ọ bụghị ndị ọkachamara. Mgbe ị na-ahụ anyị isi isi interface, ị ga-ozugbo maara otú iji ya. Dị pịa na ikpuru na dobe. Usoro iheomume dabeere video edezi na-eme ka gị niile ihe aga-eme mfe. Ị ga-ahụ ihe niile na Timeline.Check ndu peeji, biko pịa ebe a.
Mfe Video edezi - Dọrọ na dobe gị mata echiche
Na a mfe video edezi software, ihe niile bụ na gị fingertips. Ị nwere ike mfe ịdọrọ na dobe ọdịnaya dezie ozugbo. Iji tinye video / audio / foto, ikpuru na dobe ka usoro iheomume. Iji tinye ikwu n'ụzọ, ikpuru na dobe a mgbanwe ka video / foto. Iji tinye aha, ikpuru na dobe a aha template ka ọnọdụ ị chọrọ ka ọ na-egosi elu. Ịhọrọ site na 300+ video mmetụta, ikpuru na dobe ya ndị video ma ọ bụ foto ị chọrọ mmetụta ka. Plus, ihe ọ bụla ị chọrọ, dị nnọọ na-nri ngwá ọrụ na aka gị, gụnyere trimming, cropping, n'usoro n'usoro, ọdịyo edezi (video track, voiceover na ndabere music), wdg
Easy Video edezi Software, Unlimited Video Ịkekọrịta
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) paves ụzọ ịkọrọ videos ntabi na ezinụlọ na ndị enyi, ihe ọ bụla ọ bụ na YouTube, kọmputa, mobile ngwaọrụ ma ọ bụ TV, ị ga-ahọrọ ụzọ gị. Ị nwere ike ozugbo bulite video ka YouTube, nakwa dị ka ihe ịnara ozi na-ezitere Facebook na Twitter. Preset profaịlụ na-gụnyere mmepụta videos maka egwu na mobile ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, iPod, PSP, wdg dịghị ihe ọzọ akakabarede chọrọ. A Mee na-DVD ngwá ọrụ-enye gị ohere ọkụ video ka elu àgwà DVD nke na-ekiri na TV na n'ụlọ gị gị na DVD ọkpụkpọ.
Download free ikpe version nke Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Mac / Windows version) n'okpuru, na-amalite na-eme ka gị pụtara n'ụlọ fim taa!